Fandrakofana vaovao : tsy tafiditra teny Iavoloha ny mpanao gazety sasany | NewsMada
Fandrakofana vaovao : tsy tafiditra teny Iavoloha ny mpanao gazety sasany
Par Taratra sur 06/01/2018
Mitohy ny tsy fahaiza-mandrindra asa sy ny fitantanana ? Tsy tafiditra teny amin’ny lapan’Iavoloha ireo mpanao gazety maromaro, indrindra ireo sahy mitsikera mahitsy ny fitondrana, omaly. Na inona mety ho olana tany anivon’ireo haino aman-jery ireo na ny antony, tokony nohamoraina sy nikarohana vahaolana izany fa tsy hoe nosakanana hatramin’ny minitra farany. Handrakotra ny vaovao sy hitatitra izany araka ny fijeriny sy ny fahitany izany amin’ ny mpihaino sy ny mpijery ary ny mpamaky izy ireo nefa izao tratry ny sakantsakana izao. Tsy misy tsy vitan’ny fifampiresahana na fifampiraharahana amin’ny vanim-potoana lehibe tahaka ireny. Tsy tokony hohasarotina satria efa manana ny karatra famantarana (badge) mipetraka any amin’ny fiadidiana ny Repoblika ny sasany amin’izy ireo. Anisan’ireo tsy tafiditra ny avy amin’ny Free FM sy Free News, ny Viva Radio/TV, ny Kolo TV/FM, ny La Verité sy ny Inona ny vaovao…
Etsy andaniny, mbola nitohy ny tsy fahazoana mitondra finday amin’ny fidirana ny lapa. Fepetra efa nampiharina tamin’ireo vanim-potoana amin’ny lanonana teny an-toerana ny tahaka izany, saingy misy ihany ireo sokajin’olona hafa afaka mitondra izany.
Manoloana izany, tokony hojerena manokana ny mpanao gazety amin’ny fandrakofana vaovao amin’ny vanim-potoana tahaka ireny.
Une réponse à "Fandrakofana vaovao : tsy tafiditra teny Iavoloha ny mpanao gazety sasany"
Saidy LEMENA 06/01/2018 à 11:33
Mbola lavitra antsika eto Madagasikara izany hoe fahalalahan’ny mpanao gazety izany. Ny olana nefa dia tsy milaza ny marina ireo izay mpanaogazety manodidina ny fitondrana. Ny mpanao gazetin’ny TVM aza moa dia ny mitantara ny Akanjo anaovan’ireo vahiny namonjy ny fanasana no ataony. Tena izany ve no nianarana firy taona nahazahoana Diplaoma ambony ?????? Zary mirefarerfa amin’ny tany toy ireo tanora Milalao Tambazotra mpifandraisana izy ireo.